पौड्यालको अपरिचित अनुहार सार्बजनिक - समय-समाचार
समय-समाचार शनिबार, २०७८ असोज २ गते, २१:०४ मा प्रकाशित
कथाकार,समीक्षक, कवि समालोचक महेश पौड्यालको कथा सङ्ग्रह “अपरिचित अनुहार” को आज लोकार्पण भएको छ । पुस्तकमाथि समीक्षा गर्दै डा. अशोक थापा, डा. रजनी ढकाल लगायतले पौड्यालका अधिकांश कथा युवा पुस्ताकेन्द्रित रहेको भन्दै प्रसंशा गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार कृष्ण धरावासीले पनि कथासंग्रहमाथि सबैलाई हसाउदै आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको पुस्तकको मूल्य २ सय ७५ रुपैयाँ रहेको छ । पौड्यालका ‘त्यसपछि फुलेन गोदावरी’ कथासंग्रह लगायत कृति प्रकाशनमा आइसकेका छन् । उहाँ अनुवादमा पनि त्यतिकै अगाडि हुनुहुन्छ ।